Mhinduro yezvinetso zvakajairika mune ye ultrasonic yekubvisa michina
Ultrasonic yekudzora michina ndiyo musimboti wechiChinese mushonga wakabviswa, nekuda kwemabasa ayo mazhinji, kuita kwakanaka, komputa dhizaini, kugadzirwa kwakanakisa, kwave kushandiswa zvakanyanya mumatanho ese ehupenyu anokosha madhiragi kuburitsa uye kuisa pfungwa. Nhasi, isu tichaunza iyo yakajairika kunetseka ...
Ultrasonic chishandiso chitsva dhizaini mune slurry indasitiri
Iyo michina inogadzirwa neHangzhou Precision Machinery Co, Ltd. yakagadzirirwa kusimudzira kwemaitiro makuru ekugadzira michina. Nekuti iyo tangi yakakura kwazvo kana iyo tangi maitiro haigone kuwedzera zvakananga michina ye ultrasonic mutangi, iyo slurry iri muhombe tangi inoyerera ichipfuura ...
Nhanganyaya kuumbwa uye chimiro cheiyo ultrasonic inoparadzira uye nenyaya dzinoda kutariswa mukushandiswa
Ultrasonic wave rudzi rwemagetsi wave iyo vibration frequency iri pamusoro kupfuura iyo yeruzha wave. Iyo inogadzirwa nekudengenyeka kwe transducer pasi pekunakidzwa kwemagetsi. Iyo ine hunhu hweakakwira frequency, ipfupi wavelength, diki diffraction chiitiko, kunyanya yakanaka di ...
Kushanda kweiyo ultrasonic emulsification michina
Mune maindasitiri akasiyana, maitiro ekugadzira emulsion anosiyana zvakanyanya. Iyi misiyano inosanganisira izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa (musanganiswa, kusanganisira akasiyana zvikamu mune mhinduro), emulsification nzira, uye zvimwe mamiriro ekugadzirisa. Emulsions ndiko kupararira kwemaviri kana anopfuura emvura isingabatike ....
Munda kesi yeiyo ultrasonic alumina yakapararira
Kunatsiridzwa uye kupararira kwealumumina zvinhu kunovandudza mhando yechinhu Pasi pekuita kweiyo ultrasound, iyo saizi kukura kweanoumbwa akapararira anova madiki, kugovera kunova yunifomu, kudyidzana pakati pematrix nekupararira kunowedzera, uye compatib ...
anodarika makumi matanhatu nguva dzekuwedzera kwekuwedzera nekushandisa ultrasound munzvimbo yekuburitsa
Iko kushandiswa kukuru kweiyo ultrasonic tekinoroji mumunda wechivanhu chiChinese mushonga kugadzirira ndeye ultrasonic kuburitsa. Huwandu hukuru hwezviitiko hunoratidza kuti ultrasonic yekudyara tekinoroji inogona kuwedzera iyo yekubvisa kugona neinosvika makumi matanhatu nguva kana ichienzaniswa neyechinyakare tekinoroji. Fr ...
Ultrasonic kupararira nzira yakanaka ye nano particels kupararira
Nano tudonhwe tudiki tudiki saizi, yakakwira pamusoro simba, uye vane maitiro ekuzvitutumadza agglomerate. Kuvapo kwekusanganiswa kunokanganisa zvakanyanya zvakanakira nano powders. Naizvozvo, maitiro ekuvandudza kupararira uye kugadzikana kwenano powders mune yemvura svikiro inonyanya kuendesa ...
Yedu mhando JH yakapasa iko kunyorera
Hangzhou nemazvo Machinery Co., Ltd. yakanangana neiyo ultrasonic mvura yekurapa munda kweanopfuura makore gumi. Parizvino, zvishandiso zvedu zvave muminda yekurapa kweCDD, nano liposome kugadzirira, graphene kupararira, slurry kupararira, alumina kupararira, Chinese mushonga kuburitsa ...
Nei ultrasonic yekubvisa michina yakakurumbira nevashandisi?
Ultrasonic midziyo yekubvisa ine yakakwira kudhizaira kushanda, yakajairwa tembiricha uye kumanikidza kudhizaini, yakaderera simba kudyiwa, yakakwira degree of otomatiki, uye ine hunhu uye zvakanakira izvo zvakajairika nzira dzekubvisa dzisingakwanise kufanana. Inogona kushandiswa zvakanyanya mumishonga, iye ...
ne admin pane 20-09-26
Iyo kugadzirwa kweiyo ultrasonic maindasitiri ekushandisa zvigadzirwa uye dhizaini yemhinduro zvine hunyanzvi uye zvinoda hwakakosha vashandi Hangzhou nemazvo Machinery Co., Ltd. yakazvipira kune dhizaini yeiyo ultrasonic maindasitiri ekushandisa, kunyanya mumunda wekupararira. Pakutanga ...
ne admin pane 20-08-19
Ultrasonic tekinoroji ine akasiyana maficha, yedu kambani Hangzhou Precision Machinery Co, Ltd. forcus pane ultrasonic sonochemistry iyo inosanganisira iyo ultrasonic kuburitsa, kupararira, emulsification, homogenization, degassing etc. Mushure memakore anopfuura masere emakore ekuunganidzwa kwedata uye dambudziko saka ...
ultrasonic michina Canton Fair
ne admin pane 20-05-16
Iyo 2020 Canton Fair ichaitwa kubva munaJune 15 kusvika 24th kwenguva yemazuva gumi. Iyo online dumba yeyedu ultrasonic michina iri mukushandisa uye kurongeka, uye isu tinokuzivisa iwe munguva kana paine kufambira mberi.